Windows XP ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် လုပ်နည်း - MYSTERY ZILLION
Windows XP ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် လုပ်နည်း
Windows XP သုံးနေဆဲသူများကလဲ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows XP ကိုပိုမိုမြန်ဆန် စေရန်လုပ်နည်းကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါကလဲ Windows Vista ပိုမြန်နည်းကို ရေးပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခု Windows XP အတွက်လာပါပြီဗျာ။ အားလုံးပေါင်း ၁၀ ချက်ရှိပါတယ်။ Vista တုန်းကပြောခဲ့သလိုပါပဲ ဒီအတိုင်းလုပ်ရင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာများကိုတော့ ကျွန်တော်မှ လုံးဝတာဝန်ယူမှာ မဟုတ်ကြောင်းကိုတော့ ကြိုတင်ပြောလိုပါတယ်။ ကဲ စကြရအောင်ဗျာ။
challenger ရေ.. စလိုက်ကြရအောင်ဆို.မြန်မြန်လေးသာ စလိုက်တော့ဗျာ. စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု့နေပါတယ်.............
မလိုအပ်သော Start-Up Program များကိုပိတ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ Program တစ်ခုကို Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာ တစ်ချို့သော Program များဟာ ကိုယ်စေခိုင်းထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ Windows တက်တာနဲ့ သူလဲလိုက်ပြီး Run ပါတော့တယ်။ အဲဒီလို Program မျိုး ၅ ခုလောက်တင်လိုက်ရင်ပဲ သင့်စက် အတက် သူများစက်နဲ့မတူဘဲ ကြာပါတော့တယ်။
တကယ်လိုအပ်ရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်၊ အခု လိုလို မလိုလို အလိုလိုတက်လာတော့ စက်ပိုလေးတော့တာပေါ့။
၁။ run ကိုခေါ်ပါ ( Windows Key နှင့် R ကိုတွဲနှိပ်၍ ခေါ်နိူင်ပါတယ်)
၂။ msconfig ဟုရိုက်ပါ
၃။ Start Up ဆိုသော Tab ကိုရွေးပါ
၄။ ကိုယ်အသုံးမလိုသော Program များကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးပါ။ ဥပမာ Gtalk, Yahoo Messenger နှင့် အခြားသော ကိုယ်လိုမှဖွင့် မယ့် Program များပေါ့။ သိပ်တော့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး၊ Antivirus ကလွဲပြီး ကျန်တာအကုန်ဖြုတ်ပေါ့။ ပြီးရင် Restart ချလိုက်ပေါ့၊ ကိုယ်သုံးမယ့် Program တက်မလာရင် အဲဒါလေးကို ပြန်ပြီး အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်။
ဘယ်မှာလဲ ဗျ..အကိုရ ....စတော့လေ... မျှော်နေပြီ...:d
Vista ရဲ့ Graphical Effects ကြောင့် စက်လေးစေသလိုပဲ XP ရဲ့ Graphical Effects ကြောင့်စက်ကိုလေးစေပါတယ် (Vista လောက်တော့မဆိုးပါဘူး)။ ဒါကြောင့် XP ရဲ့ Graphical Effects ကို မသိမသာလေး ပိတ်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
၁။ Control Panel ထဲကိုဝင်ပါ
၂။ System Icon ပေါ်မှာ Double Click လုပ်ပါ
၃။ Advance Tab ကိုရွေး
၄။ Performance Box မှာ Settings ကိုရွေး
၅။ Visual Effects ဆိုတဲ့ Tab မှာ ကျွန်တော် အောက်မှာ ရေးထားတာလေးတွေပဲ ချန်ပြီးတော့ ကျန်တာတွေရဲ့ အမှန်ခြစ်တွေ ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဗျာ (မသိမသာလေး လျှော့တာပေါ့ဗျာနော် )
၆။ ပြီးရင် Apply နှိပ်၊ OK ထပ်နှိပ်ပေါ့။
Speed-Up File Browsing ဟဲဟဲဟဲ
မိတ်ဆွေတို့ My Computer ကို Double Click လုပ်တဲ့ အခါတိုင်းမှာ အနည်းငယ် လေးပြီးမှတက်လာတာကို ကြုံကြမှာပါ ( အလွန် Performance ကောင်းတဲ့ စက်တွေကလွဲလို့ပေါ့)။
ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Windows Explorer ကိုမိတ်ဆွေဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ Windows XP ဟာ Network Files တွေ Printer တွေကို အလိုအလျောက်ရှာနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Control Panel ကိုသွား
၂။ Folder Options ကိုရွေး
၃။ View Tab ကိုရွေး
၄။ Automatically search for network folders and
၅။ Apply ပြီးတော့ OK ပြီးရင် စက်ကို Restart လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
တို့ကိုကို ချဲလင်ဂျာကတော့ မြန်ဆန်အောင်လုပ်နည်းတွေချည်းပဲတင်နေပါလား :D
7,Vista, XP နောက်ပိုင်း တို့ubuntu ဘက်ပါလှည့်လားမလားမသိဘူး
Page File Size ကိုလျှော့ချရအောင်နော်
တကယ်လို့ မိတ်ဆွေမှာ 512MB အောက် RAM ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာကိုကျော်သွားလိုက်ပါ။
Default အားဖြင့်ဆိုရပါက Page File Size သည် ပုံသေမဟုတ်ပေ၊ Windows သည်လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို Page File Size ကိုပြောင်းလဲနေသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းနေခြင်းကပင် စက်ကိုလေးစေပြန်ပါသည် (Counter Effect လို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးဗျာ နော် .... )
၁။ My Computer ကို Right Click နှိပ်၍ Properties ကိုသွားပါ
၂။ Advance Tab ကိုသွား၊ Settings ကို Click လုပ်၍ Performance Section အောက်တွင် Advance Tab ကိုထပ်မံ Click လုပ်ပါ
၃။ Virtual Memory အောက်တွင် Change ကိုနှိပ်ပေးပါ
၄။ Drive C ကိုရွေးပေးပါ
၅။ Custom Size ကိုရွေးပါပါအုံးနော်
၆။ Initial Size နှင့် Maximum Size ကို တန်ဖိုးတူအောင် ထားပါ။
၇။ ပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်။
စပါတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော်က မြန်မာလိုရိုက်တာ ကြာနေလို့ပါ။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ :d
စပြီလေ၊ မိုးနတ်သားလေးရဲ့ :d:d
မပူနဲ့၊ တို့ ကိုကိုစူဠ အတွက် ubuntu မြန်နည်းပါရေးအုံးမယ်၊ မကြာမီလာမည်။
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ... အားပေးနေပါတယ်... ရှိသေးရင် ဆက်ရေးပါအုံး... ကျနော် လည်း လုပ်ကြည့်ချင်လို့ပါ.... ဆိုင်မှာ....:d
Third Party Software ကို အကြံပြု ပါမယ်။ Vista တုန်းကအတိုင်းပါပဲ။ C Cleaner ဆိုတဲ့ Software လေးပေါ့။
www.piriform.com မှာ အခမဲ့ ရယူနိူင်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ File များသာမက Registry ကိုပါရှင်းလင်းပေးနိူင်လို့ ကြိုက်ပါတယ်။
Alternative အနေနဲ့ Auslogics Registry Cleaner နဲ့ RegCure တို့ကို အကြံပြုပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုတော့ Google အားကိုးပြီးသာရှာလိုက်ပါဗျာ။
အားလုံးသိပြီး သားလေးကိုပဲ ပြန်ရေးပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ Disk Clean Up ပါတဲ့။
၁။ Run ကိုခေါ်ပါ
၂။ cleanmgr လို့ရိုက်ပါ
၃။ OK နှိပ်လိုက်ပေါ့
၄။ အကုန်လုံးကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်ဗျို့။ အကုန်လုံးသိပြီးသားမို့ အတိုပဲ ရေးလိုက်တယ်နော်
Direct Memory Access ကို Enable ပြုလုပ်ခြင်း
၁။ Right Click My Computer၊ Properties ကိုရွေး
၂။ Hardware Tab ကိုရွေး
၃။ Click the Device Manager button
၄။ Double-click IDE/ATAPI controllers
၅။ Double-click on the Primary IDE Channel
၆။ Click on the Advanced Settings tab. The
tab may or may not be available for each option. It is only available in Primary and Secondary Channels.
၇။ Set the Transfer Mode to "DMA if Available" both for Device 1 and 0
၈။ Click OK
၉။ Perform the same operation for other items in the list, if applicable.
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာလိုရိုက်ရမှာပျင်းလို့ပါနော်။
Vista မှာ ရေးခဲ့တုန်းကလိုပါပဲ။ Indexing Service ကိုပိတ်ပါမယ်။
ပိတ်ပုံပိတ်နည်းကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးတော့မယ်နော်။ ရှင်းပါတယ်
6. Look for the вЂњIndexing ServicesвЂќ component in the list
ကျန်တာနောက်နေ့မှ ဆက်ရေးမယ်နော်၊ Korea ကားတွေလို အချိန်ဆွဲတာမဟုတ်ပါ။
မလိုအပ်သော Program များနှင့် အသုံးမပြုသော Program များကိုဖြုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ Software တစ်ခုတင်တဲ့အခါ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အဆစ်ပါလာတဲ့ Program အသေးလေး ပါရောပြီးတင်မိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခုတစ်လေဟာ ကိစ္စမရှိပေမယ့်လို့ များလာတဲ့အခါ ဝန်ပိုဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဥပမာ - C Cleaner တင်တဲ့အခါ Yahoo Toolbar က အဆစ်ပါလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တင်မှာလားဆိုတာ သူကမေးပါတယ်၊ User တစ်ချို့က အမှတ်တမယ့် တင်မိတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ Skype တင်တဲ့အခါ Browser Highlighter ပါလာတာမျိုးတွေပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ အသုံးမပြုတဲ့ Program များဖြုတ်ပါပေါ့နော်။
ကျွန်တော်တို့က Pirate Software တွေပေါခြင်းသောခြင်းဆိုတော့ Windows တင်ပြီးရင် တွေ့ကရာ အသုံးတဲ့မယ့်ဟာ အကုန်လျှောက်တင်တော့တာပဲ ( ကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့ဗျာ)။
တကယ်တော့ မလိုရင်မတင်တာကောင်းပါတယ်။ တင်မိရင်လဲ ပြန်ဖြုတ်ပေါ့ဗျာ။
ဥပမာ - ACD See တင်ပြီး နောက်ထပ် Picasa ထပ်တင်တာမျိုးတွေပေါ့။ ဟိုဟာလဲ ကြိုက်တယ် ဒီဟာလဲကြိုက်တယ် ဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ သဘောပါပဲနော်
နောက်ဆုံးနည်းကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ၊ ဖတ်ပြီးရင် ဒါတော့ နင်ပြောမှလားလို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ Antivirus ကိုပုံမှန် Update လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ပုံမှန် Update လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးများလို့ ပြောမနေတော့ပါဘူးနော်။ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့် Antivirus လဲရွေးဖို့လိုပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Keygen တွေ Crack တွေသုံးတော့ အဲဒါတွေပိတ်တဲ့ Antivirus မျိုး ဆိုလဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မကိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ Kaspersky ကို Recommend လုပ်ပါတယ်ဗျာ (ကျွန်တော် အကြံပြုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ ဘယ် Antivirus ကဖြင့် ဘယ်လိုဆိုတာ ငြင်းခုံခြင်း မပြုပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်)။
ကဲ ပြီးပါပြီ။ The End :D:D
၅။ visual effects ဆိုတဲ့ tab မှာ ကျွန်တော် အောက်မှာ ရေးထားတာလေးတွေပဲ ချန်ပြီးတော့ ကျန်တာတွေရဲ့ အမှန်ခြစ်တွေ ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဗျာ (မသိမသာလေး လျှော့တာပေါ့ဗျာနော် :d)
အကိုရေ.. မသိမသာလျှော့တာလား.အကုန်လျှော့တာလားတော့မသိဘူးဗျာ.. ကျွန်တော်တော့ အဲဒီထဲက ရှိတဲ့ အမှန်ခြစ်တွေ အကုန်လုံးဖြုတ်ပြစ်ထားပါတယ်.. စက်တော့ နည်းနည်းပေါ့သွားတယ်လို့ စ ိတ်က ထင်ရတာပဲ..ဘာမှ တော့ ပြဿနာမရှိလောက်ပါဘူးထင်နော်... အကုန်ဖြုတ်ထားလို့..ဘာဆိုကျိုးများ ရှိနိုင်မလဲဆိုတာ.. ပြောပြပေးပါအုံး ခင်ဗျာ...
Graphical Effects ကိုဖြုတ်တာဖြစ်လို့ အကုန်ဖြုတ်လဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ၊ စိတ်ချလက်ချ ဖြုတ်လို့ရပါတယ်။ ကြည့်လို့တော့ မလှတော့ဘူးပေါ့နော်။
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ မသိမသာဖြုတ်တာက ကြည့်ရင် အရင်အတိုင်းနီးပါးပဲ သိပ်မသိသာဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပိုသွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ ရပါတယ် အကုန်ဖြုတ်တော့ ပိုမြန်တာပေါ့
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ မသိမသာဖြုတ်တာက ကြည့်ရင် အရင်အတိုင်းနီးပါးပဲ သိပ်မသိသာဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပိုသွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ ရပါတယ် အကုန်ဖြုတ်တော့ ပိုမြန်တာပေါ့ :d
အခုလိုပြန်လည် ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ... နောက်မှ ထပ်မေးအုံးမယ်နော်...
ဟုတ် မေးပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော် သိသလောက်ပြောပါ့မယ်။
ကျွန်တော်မသိရင် သိတဲ့သူပြောပါလိမ့်မယ် :d:d